ဆိုရှယ်မီဒီယာ တွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်လိုက်တဲ့ လူငယ်တို့ရဲ့ ကော်ရုပ်လေး Selena Gomez – ShweBo News
ဆိုရှယ်မီဒီယာ တွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်လိုက်တဲ့ လူငယ်တို့ရဲ့ ကော်ရုပ်လေး Selena Gomez
May , Cele
ကမ္ဘာကျော် အဆိုတော် Selena Gomez ဟာ ဒီနေ့ခေတ် သူနဲ့ရွယ်တူ မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် ဆိုရှယ် မီဒီယာဟာ ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ မေလ ၁၅ ရက်နေ့မှာ သတိပေး ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဟာ Instagram မှာ Follower အရေအတွက် သန်း ၁၅၀ ကျော် ရရှိထားတာ ဥပမာကောင်းတခုဖြစ်တယ်လို့တော့ ပြောပါတယ်။
Selena Gomez ပါဝင်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေး အသားပေး Zombie ရုပ်ရှင် “The Dead Don’t Die” ကို ယခု ကျင်းပနေတဲ့ ကိန်းစ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ စတင်ပြသခဲ့ပြီး သူ့ကို နာမည်ကြီးအောင် လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေဟာ မှားယွင်းတဲ့ လက်တွေနဲ့ အဖျက်အမှောင့်တွေသာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ် အဆိုတော် Selena က “ကမ္ဘာကြီးဟာ တော်တော်လေးကို သိသိသာသာ ပြောင်းလဲနေပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ Jarmusch က ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာ ဆိုရှယ်မီဒီယာဟာ ကျမတို့ခေတ် ကာလ ရွယ်တူ မျိုးဆက်တွေအတွက် ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာကို ထည့်သွင်းထားပါတယ်” လို့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တခုမှာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
မလေးရှားက ဆယ်ကျော်သက်တဦးက သူသေသင့်လား၊ အသက်ရှင်သင့်လားလို့ Instagram မှာ မဲဆန္ဒပေးခိုင်းတဲ့ ပို့စ်တခုကို တင်ခဲ့ပြီးနောက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေသွားခဲ့ပြီးနောက် အခုလိုမျိုး မှတ်ချက်စကားထွက်ပေါ်လာတာပါ။ မလေးရှားနိုင်ငံ၊ အရှေ့ဆာရာဝပ်ပြည်နယ်၊ Kuching မြို့က အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးဟာ Facebook ကပဲ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ မီဒီယာ ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ မဲဆန္ဒပေးခိုင်းတဲ့ ပို့စ်တခုကို တင်ခဲ့ပြီးနောက် သေဆုံးသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိန်းစ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ အော်တိုလက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းသူတွေကြောင့် အကျပ်ရိုက်ခဲ့ရတဲ့ Gomez က ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ သတင်းအတုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း သတိပေးသွားခဲ့ပါတယ်။
သူက “ကိုယ့်ပလက်ဖောင်းကို ကိုယ်သုံးတာ တော်တော်လေးကို ထူးခြားတယ်ဆိုတာ ကျမ နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေနဲ့ ယောကျာ်းလေးတွေ ဘယ်လောက်တောင် အကာအကွယ်မဲ့နေတယ် ဆိုတာကို မြင်လိုက်ရတဲ့အခါ ကျမ တကယ့်ကို ကြောက်မိသွားပါတယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။
အသက် ၁၀ နှစ်အရွယ် ရောက်နေတဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာဆိုရင် ဆိုရှယ်မီဒီယာကို ကျောင်းတက်ရက် တရက်မှာ တနာရီအထက် သုံးစွဲနေပြီးတော့ ဆိုရှယ်မီဒီယာကို အဲ့ဒီလောက် မသုံးစွဲတဲ့ မိန်းကလေးတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် စိတ်ကျန်းမာရေး ပိုဆိုးရွားလာတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
Gomez က “သူတို့က သတင်းတွေကို သတိမထားမိပါဘူး။ လူတွေဟာ တခါတလေ မှန်ကန်တဲ့ သတင်းအချက်အလေက်တွေကို မရဘူးဆိုတာ တကယ့်ကို အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ ကျမထင်ပါတယ်”လို့ ဆိုပါတယ်။
Previous Previous post: ဥရောပရွှေဖိနပ်ဆုက ဘယ်သူ့အတွက်လဲ? မက်ဆီလား၊ ဘာပေလား?
Next Next post: မကျြစိစလငျဒါကို ဘဘာဝနညျးလမျးမြားဖွငျ့ ဘယျလိုကုသကွမလဲ
Visitors today : 16,478
Page views today : 50,968
Total visitors : 98,279
Total page view: 252,028